Ciidamada Danab oo saakay la wareegay deegaano Al Shabaab maamulayeen * Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Ciidamada Danab oo saakay la wareegay deegaano Al Shabaab maamulayeen
By A warsame	 On Jun 22, 2019
Ciidamada Kumaandooska Soomaaliya ee loo yaqaan Danab ayaa saakay howlgalo ka fuliyay deegaano kuyaala duleedka magaalada Marka ee xarunta gobolka Shabeelaha Hoose.
Sida aan wararka ku heleyno ciidamada kumaandooska ayaa Al Shabaab kala wareegay deegaano kuyaala duleedka magaalada Marka halkaas oo la sheegay in Al Shabaab ku sugnaayeen mudooyinkii lasoo dhaafay.
Deegaanada Al Shabaab lagala wareegay ayaa saraakiisha ciidanka Milatariga sheegeen in ay ahaayeen kuwa Al Shabaab kasoo abaabuli jireen weerarada ay ka fuliyaan magaalada Marka iyo duleedkeeda.
Al Shabaab ayaa wali maamusha deegaano kale oo kuyaala duleedka magaalada Marka, waxaana maamulka Marka iyo saraakiisha ciidanka Milatariga dhawaan shaaciyeen in la fulinayo howlgalo go’doonka looga qaadayo magaalada Marka.
Deadly blast kills 3 soldiers near Mogadishu
At least 9 killed in tribal clash for central Somalia